Health Archives - Enepali Online
यौनको प्रसंग आउनसाथ धेरैले लुकाउने समस्या हो, यौनमा असन्तुष्टि । यस्तो असन्तुष्टि किन हुन्छ ? मनोविद्हरुले यसका केहि साझा कारण खोतलेका छन् । यसमा मानसिक कुरादेखि हर्मोनल गडबडीसम्म हुनसक्छ । यौन असन्तुष्टिको चर्चा गर्नसाथ धेरैले भन्छन्, यौन उत्तेजना नै भएन । आफु वा आफ्नो पार्टनरमा यस्तो समस्या भएपछि धेरैको यौनजीवन खल्लो हुने गर्छ । अब के गर्ने त ? यौन उत्तेजनाको लागि हामी भियाग्रा सम्झन्छौं । भियग्राले पुरुषहरुको ‘इरेक्सन’ बढाउन प्रभावकारी काम गर्छ । तर,…
"अब किन चाहियो भियग्रा ? खानुहोस् यी खानेकुरा"
एजेन्सी । हामीले दैनिक सेवन गर्ने तरकारी मात्रा मिलाएर पकाउँदा स्वादिलो मात्र हुँदैन , शरीरलाई स्वस्थ राख्नुका साथै मस्तिष्क पनि बढाउँछ । यसले खाद्य–उपचार (फुड थेरापी) को पनि काम गरिरहेको हुन्छ । पोषिलो परिकारले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाएर क्यान्सर, मुटुरोग र मधुमेहजस्ता असाधारण रोगको सम्भावनासमेत हटाउँछ । त्यसैले औषधीय महत्व भएका सागसब्जीका बारेमा सबैलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ । साग र च्याउका फाइदा यस्ता छन् : नेपालमा रायो, तोरी, फापर, बेथु, मेथी, सौँप, पालुंगो, चौँसुर,…
"यस्ता छन् औषधीय महत्व भएका साग र च्याउका फाइदा"
सुन्दर तथा आर्कषक अनुहार कसको राजाईमा नपर्ला र ? बिभिन्न महंगो केमीकल युुक्त शौन्दर्य प्रशाधनको प्रयोगले भएको अनुहारको शुन्दरता पनि हराएर झन् समस्या भएको आजभोली धेरैको गुनासो सुनिन्छ । हामी यहाँ यस्तो घरेलु बिधि जसको एक दिन बिराएर लगातार एक महिना सम्मको प्रयोगले अनुहारको दाग धब्बा हटाई चम्कीलो बनाउन निकै सहयोगी सिद्ध हुने बारे चर्चा गर्दैछौं । १ आलु र कागती एउटा आलुलाई ताछेर धुने त्यसलाई सफा सिलौटा या ब्लेन्डरमा आधी कागती काटी रस निचोरेर ६,७ थोपा…
"छिटो अनुहारको दाग हटाउने यस्तो घरेलु उपाय !"